Lorcaserin (Belviq) ntụ (616202-92-7) hplc ma98% | AASraw Fat Loss
3.50 si 5	dabere na 2 ahịa Fim
SKU: 616202-92-7. Category: Ọla abụba
Lorcaserin (Belviq) ntụ ntụ
Molekụla Formula: C11H14ClN
Ọbara arọ: 195.692
N'okpuru ebe a bụ ihe ndị e ji chịkọta kemikal nke Lorcaserin (belviq); E gosipụtara ha na tebụl n'okpuru ebe a na-elegide anya.
Lorcaserin (Belviq) bụ ọgwụ mgbu nke na-egbu egbu nke Arena Pharmaceuticals mepụtara. Ọ bụ otu n'ime ọgwụ ndị a na-ezo aka dịka ndị agonists na-anabata ọrịa serotonin. Emere ya iji nyere gị aka inwe obi ụtọ mgbe ị rie nri obere. Ọ na-egbochi agụụ site na ịgbalite 5-HT2C ndị nabatara, nke bụ ụdị ndị na-anabata serotonin na mpaghara ụbụrụ (hypothalamus) nke na-achịkwa agụụ. Mgbe ha gosipụtara ahụ gị ka obi dị gị ụtọ, ị ga-eri obere, ya mere ọ ga-eme ka ọ ghara ịdị ogologo oge.
Mmiri nke Lorcaserin hydrochloride hemihydrate na mmiri dị elu karịa 400 mg / ml. Otu mbadamba Belviq nwere milligrams 10.4 nke crystalline lorcaserin hydrochloride hemihydrate (ọcha na-acha ọcha na ntụ ntụ), nke nhata 10.0 milligrams anhydrous lorcaserin hydrochloride. O nwere ihe ndị ọzọ, gụnyere NF sterete NF, talc USP, FD & C Blue #2 aluminom, titanium dioxide USP, polyethylene glycol NF, mmanya polyvinyl alcohol USP, colloidal silicon dioxide NF, sodium phosphate cristalloslose, microcrystalline cellulose na hydroxypropyl cellulose NF.
Ndị nzaghachi 5-HT2C dị nso na ụbụrụ mmadụ, a pụkwara ịchọta ya na thalamus, hypothalamus, cortex, hippocampus, choroid plexus, cerebellum, na amygdala. Mmetụta nke ndị na-anabata 5-HT2C na hypothalamus na-emepụta mmepụta POMC (proopiomelanocortin) ma si otú ahụ na-akwalite mmebi nha site na satiety. Nkwado a na-akwado site n'ịgba ule a na-ahụ anya na nchọpụta nchọpụta ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na a na-eche na ndị natara 5-HT2C na-enyere aka n'ịchịkwa agụụ, endocrine secretion, na ọnọdụ, ọ bụghị onye a maara kpọmkwem usoro ihe omume.
Ọ dị mma icheta na ọkachamara na-ahụ maka nlekọta ahụ ike akọwawo ọgwụ a n'ihi na ha ekpebiwo na uru ị nwetara dị elu karịa ihe ize ndụ nke mmetụta ndị dị na ya. Ọtụtụ ndị na-aṅụ ọgwụ a adịghị egosipụta mmetụta dị oké njọ.
Tupu ị na-ebu ọnụ, ka onye na-ahụ maka ọgwụ ma ọ bụ dọkịta mara ma ị na-enwe ọgwụ ọjọọ; ma ọ bụ na ị nwere ihe ọ bụla ọzọ allergies. Lorcaserin nwere ihe ndị na-adịghị arụ ọrụ nke nwere ike iduga mmeghachi omume na-adịghị mma ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ. Jụọ onye na-ere ọgwụ gị ka o nye gị nkọwa ndị ọzọ.
Tupu ịṅụ ọgwụ a, gwa onye na-ahụ maka ọgwụ ma ọ bụ dọkịta gị banyere akụkọ nlekọta ahụike gị, karịsịa nsogbu akụrụ, ọrịa shuga, nsogbu imeju, ọrịa obi (gụnyere ọrịa obi, ọrịa obi valve, obi mkpụmkpụ obi, nsogbu obi) nsogbu nke nwere ike ime ka ohere na-egbu mgbu / ogologo oge n'ime ụmụ nwoke (gụnyere mpempe deformed, ọrịa Peyronie, otutu myeloma, sickle cell anemia, leukemia).
Nri a na-agwụ ike nke agụụ a nwere ike ime ka ị ghara ime ka echiche gị ma ọ bụ nkwụsị. Marijuana ma ọ bụ mmanya pụrụ ime ka mmetụta ndị a ka njọ. Ejila ígwè, ụgbọala, maọbụ mee ihe ọ bụla nke chọrọ ka ị mara anya ruo mgbe i nwere ike ime ya nke ọma. Debe mmanya na-aba n'anya ma gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị na-eji wii wii.
Ọ bụrụ na ị ga-amalite ịwa ahụ, ọ dị mma ka ị gwa dọkịta gị ma ọ bụ dọkịta banyere ngwaahịa niile ị na - ewere (gụnyere ọgwụ ndị na - abụghị ọgwụ, ọgwụ ndị na - emepụta ọgwụ, na ọgwụ ọgwụ).
Ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa shuga, ihe nrịba a na-ebu ibu nwere ike imetụta shuga shuga gị. Jide n'aka na ị na-enyocha ọkwa shuga gị n'ọbara na oge ọ bụla dị ka a gwara ma kọọrọ gị dọkịta gị. Mee ka dọkịta gị mata ma ọ bụrụ na ị nwere obere shuga shuga. Onye ọrụ nlekọta ahụike gị nwere ike ịchọ ịgbanwe usoro mmega ahụ gị, nri ma ọ bụ ọgwụ shuga.
A gaghị ewere ọgwụ a n'oge ime ime n'ihi na ọ nwere ike imerụ nwa e bu n'afọ. Jụọ dọkịta gị banyere iji ụdị nchịkwa a pụrụ ịdabere na ya. Ọ bụrụ na ị dị ime ma ọ bụ na-atụrụ ime, gwa onye ọrụ ahụike gị ozugbo.
Ka ọ dị ugbu a, a maghị ma ọgwụ a ọ na-abanye n'ime mmiri ara ara. Iji gbochie ohere nke ihe ize ndụ nye nwatakịrị, ị na-enye nwa mgbe ị na-eji ọgwụ a akwadoghị. Jide n'aka na ị gakwuru dọkịta gị tupu ị na-aṅụ ara ara.
Jiri akwukwo ozi akwukwo jiri nlezianya mee nke oma ma oburu na di gi site na ogwu gi tupu gi amalite iji lorcaserin na mgbe obula i nwere ike mechie. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, jụọ onye na-ere ọgwụ ma ọ bụ dọkịta gị.
Were ọgwụ mgbochi a na-eri nri na ọnụ ma ọ bụ na-enweghị nri dị ka onye na-enye ọgwụ na-enye gị ntụziaka, ugboro abụọ kwa ụbọchị. Jiri ọgwụ a mgbe nile iji nweta ihe kachasị na ya. Iji nyere gị aka icheta, buru pill n'otu oge ahụ kwa ụbọchị.
Ndị ọgwụ ndị na-esonụ nwere ike imetụta otú ụbụrụ na-arụ ọrụ:
A "nwere ike" nke bụ ọgwụ mgbochi isi na-agwọ ọrịa-dị ka Maxalt, Zomig almotriptan, rizatriptan, sumatriptan, frovatriptan, zolmitriptan, Imitrex, na ndị ọzọ.
erectile dysfunctiondrugs- Levitra, Viagra avanafil, Cialis, sildenafil, tadalafil, na ndị ọzọ;
ụkwara ma ọ bụ ọgwụ ọjọọ nke nwere dextromethorphan;
ọgwụ iji gwọọ ọrịa uche, ọnọdụ obi ma ọ bụ nchekasị.
Akụkọ BBC na Nchekwa na arụmọrụ nke Lorcaserin HCL (CAS 616202-92-7)
Ndị okenye na - ewere ọgwụ na - enwekwa nsogbu nke ụdị ọrịa shuga 2. Mkpụrụ ahụ na-akwụ ụgwọ na £ 155-225 ($ 220-290) kwa ọnwa na US. Lorcaserin na-enye ụzọ ọzọ dị mma iji mee ka usoro mbelata-mbelata dị ka ịwa ahụ ịwa ahụ n'etiti ndị ọzọ.
Akụkọ ọzọ nke BBC bụ nke ndị nnyocha na Mahadum Rowett nke University nke Aberdeen dere bụ nke mere nnyocha banyere agụụ. Ndị ọkà mmụta sayensị kwuru na nnyocha ha na-eri banyere agụụ erila ha akụkụ ụfọdụ nke ụbụrụ.
AAS raw na-eme ka 98% Lorcaserin raw ntụ ntụ si bodybuilders ma ọ bụ n'okpuruala labs n'ihi na iji ego furu efu.
Lorcaserin ntụ ntụ: Ihe niile gbasara ọgwụ ọjọọ egwu
Mmetụta Lorcaserin: Lorcaserin ntụ ntụ ọ na-arụ ọrụ n'ezie maka oke abụba?
20 ihe kachasị mkpa Ị ga-achọ ịma gbasara ọkụkọ Lorcaserin HCL
Weissman NJ, Sanchez M, Koch GG, et al. Echocardiographic ntule nke obi obi valvular regurgitation na lorcaserin si nyocha nke 3 phase 3 ule ọnwụnwa. 2013 Imaging Cardiovasc Circulation; 6: 560-7
Halford JC: Ịṅụ ọgwụ ọjọọ n'ọgwụgwọ. Ọgwụ Ọjọọ Na-akpata Ọgwụ. 2006 Apr; 7 (4): 312-8.
Thomsen WJ, Grottick AJ, Menzaghi F, et al. Lorcaserin, onye edemede 5-hydroxytryptamine2C bụ onye na-ahọpụta mmadụ: in vitro na njirimara nke ọgwụ na-emepụta ndụ. J Pharmacol Exp Ther 2008; 325: 577-87
Smith BM, Smith JM, Tsai JH, et al. Nchọpụta na njirimara-ọrụ mmekọrịta nke Lorcaserin, onye na-ahụ maka aghara aghara nke 5-HT2C serotonin maka ọgwụgwọ oke. J Med Chem 2008; 51: 305-13
BBC News, "A Obere ìgwè nke ụbụrụ nwere ike ijide ibu dị ka ndị nchọpụta Aberdeen si kwuo. "